Arsivan'ny Zavakanto & Kolontsaina - IntoKildare
Manomboka amin'ny andrana mankany amin'ny nentim-paharazana, tadiavo ireo hetsika ara-javakanto sy kolontsaina mahafinaritra rehetra, fetibe ary manintona izay atolotr'i Kildare.
Co. Kildare dia fantatra amin'ny maha distrika sariaka sy ara-piarahamonina, miaraka amin'ny zavatra maro atao mandritra ny taona – ary tsy resaka hazakazaka soavaly fotsiny no resahinay. Raha ny marina, fantatra amin'ny hetsika ara-kolontsaina maro ny Co. Kildare, na teatra izany na fampisehoana mozika ao amin'ny Ivotoerana momba ny zava-kanto any Riverbank na iray amin’ireo fety na hetsika fanao isan-taona. Betsaka ny azo jerena sy atao – maninona raha atambatra amin'ny fitsidihana mahafinaritra hetsika koa?
Ny Ardclough Village Center dia misy ny 'From Malt to Vault' - fampirantiana izay mitantara ny tantaran'i Arthur Guinness.
Studio zava-kanto sy trano fisotroana kafe izay ahafahan'ny mpitsidika mandoko ny entana nofinidiny ary manampy ny fikasihan'izy ireo manokana ho toy ny fanomezana na fitadidiana.
Galerie praiminisitra Kildare nanomboka tamin'ny 1978, mampiseho ny kanto nataon'ny mpanakanto maro nanangana an'i Irelands.